विन्डोज १० मा कसरी मद्दत पाउने? - पीसी
विन्डोज १० मा कसरी मद्दत पाउने?
प्रत्येक अपडेटको साथ नयाँ क्षमताहरू थप्दा, विन्डोज १० मा कसरी मद्दत गर्ने भनेर जान्न यो काममा आउँदछ। विन्डोज सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको अपरेटिंग सिस्टमहरू मध्ये एक हो; तसर्थ 'मद्दत प्राप्त गर्न' आफ्नै अनुप्रयोग बनाउनेमा यसले पूर्ण रूपमा अर्थ राख्छ।
यस लेखमा, हामी कसरी विन्डोज १० मा मद्दत / सहयोग पाउने बारेमा छलफल गर्नेछौं। म्यानियर समय, जब नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा तपाइँको प्रणाली पुरानो हार्डवेयर वा कुनै अन्य कारणहरूले गर्दा अडिग हुन सक्छ; तपाइँ विन्डोज १० मा कसरी मद्दत लिने बारे जान्न चाहानुहुन्छ। चिन्ता नलिनुहोस्। यस पोष्टमा, हामी कसरी हामी विन्डोज १० मा मद्दत लिन सक्दछौं र तपाईंको समस्यालाई मिल्दो छनौट गर्न सक्दछौं।
विन्डोज १० मा कसरी मद्दत पाउने - बहु तरीकाहरू
१. माइक्रोसफ्ट समर्थन
जब तपाईंको प्रणालीले तपाईंको कमाण्डहरू र प्रणालीमा कुनै अन्य बगहरूप्रति प्रतिक्रिया देखाउँदैन, तपाईं वेब सर्फ गर्न सक्नुहुन्छ केही उत्तरहरू फेला पार्न। माइक्रोसफ्टको नामले एक वेबसाइट छ https://support.microsoft.com/ । यहाँ भित्र तपाईले आफ्ना सबै उत्तरहरू ओएसदेखि लिएर माइक्रोसफ्टका उत्पादनहरूमा माइक्रोसफ्ट किनारमा पाउनुहुनेछ।
तपाईं यस मुद्दालाई सुल्झाउन सक्षम हुनुपर्दछ। तपाइँको प्रणालीमा भएका सबै त्रुटिहरू भण्डार गर्न तपाइँको Microsoft लाइभ खातामा साइन इन गर्न निश्चित गर्नुहोस्। भविष्यमा केसमा तपाईले त्यहि समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ, तपाई सजिलैसँग तिनीहरूको समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
२. विन्डोज १० मा मद्दत अनुप्रयोग पाउनुहोस्
तपाइँ प्रणालीका त्रुटिहरू फेला पार्न Microsoft द्वारा आधिकारिक अनुप्रयोग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कम्प्युटरहरू यस अनुप्रयोगको साथ पूर्व स्थापित। जहाँसम्म, यदि तपाईंसँग अनुकूलन निर्मित पीसी छ, तपाईंले अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नु पर्छ। योसँग भर्चुअल सहायता सफ्टवेयर छ जुन तपाईको प्रणालीमा भएका समस्याहरू हटाउनका लागि चरणहरूको मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ। तपाईं कुनै पनि अन्य कुराकानी अनुप्रयोगमा गरेको जस्तै कुराकानी को माध्यम को साथ सामना कोहि पनी समस्या गर्न सक्नुहुन्छ।
T. समस्या निवारण
यो चीजहरूको अधिक हार्डवेयर पक्षको साथ तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्षम हुनेछ। यदि एक उपकरण तपाइँको कम्प्युटरबाट पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम छैन, यो काम रोक्न सक्छ। यो जहाँ समस्या निवारण कार्यक्रमहरू आउँदछ। समस्या निवारकले यूट्यूबको हार्डवेयर र सफ्टवेयर सँगसँगै जानको लागि सुनिश्चित गर्दछ।
धेरै चोटि यो ड्राइभरको कारणले हुने छैन अपडेट गरिएको छैन, जसले यी सबै दुर्घटनाहरू निम्त्याउँछ। यो सजिलो प्रक्रिया हो; तपाईंले कार्य निवारण गर्न चाहानुभएको कार्यमा क्लिक गर्नु आवश्यक छ। यसले एक वा दुई मिनेट लिन सक्दछ, तर तपाइँको मुद्दा सुल्झाइनेछ।
कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने उत्तम तरिका भनेको यूट्यूबको माध्यमबाट हो। केहि प्रयोगकर्ताहरूले प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्नका लागि चरण-देखि-चरण गाईड अपलोड गरे। यस विधिले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ एक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंलाई राम्रो तरिकाले मद्दत गर्दछ। तपाईं साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको कम्प्युटर स्थिर छ भने पनि, तपाईं सक्नुहुन्छ यूट्यूबमा भिडियो हेर्नुहोस् माध्यमिक उपकरणमा र त्यसपछि मुद्दा समाधान गर्नुहोस्। तपाईं अतिरिक्त पैसा बचाउनुहुनेछ जुन तपाईं प्राविधिक समर्थनमा खेर फाल्न सक्नुहुन्छ। यूट्यूबको सबै भन्दा राम्रो फाइदा यो हो कि दिइएको मद्दत सबै नि: शुल्कको साथ सहि पनि छ।
Applications. अनुप्रयोगहरूमा कुञ्जी सर्टकट
यदि तपाईंको मुद्दा अनुप्रयोग पक्षमा अधिक छ भने, तपाईं F1 कुञ्जी वा Esc कुञ्जी थिच्न सक्नुहुन्छ। F1 चाँडै तपाईं अनुप्रयोगको समर्थन साइटमा नेभिगेट हुनेछ। धेरै माईक्रोसफ्ट अनुप्रयोग F1 कुञ्जी समर्थन गर्दछ। माईक्रोसफ्ट अनुप्रयोगहरूमा यस कुञ्जी प्रयोग गर्दा एक्सेल / शब्द वा ओनोटले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ।
यद्यपि, अन्य अनुप्रयोगहरूले F1 कुञ्जी समर्थन गर्दैन; यस्तो अवस्थामा तपाईको लागि Esc कुञ्जी प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। Esc कुञ्जी थिचे पछि, मद्दत सेटिंग्समा नेभिगेट गर्नुहोस्। साथै, रिबन (मेनु) मा मद्दत खण्ड हेर्नुहोस्। प्रत्येक अनुप्रयोगसँग यो छ।
जब तपाइँ भर्खरै यो सुरू गर्दै हुनुहुन्छ, यसले तपाइँलाई धेरै मद्दत गर्दछ। सुझावहरू अनुप्रयोग शुरुआतीहरूको लागि हो जुन धेरै अड्किएर जान्छन् र कहाँ सुरु गर्ने थाहा हुँदैन। यस अनुप्रयोगले अपरेटिंग प्रणाली कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सटीक प्रतिनिधित्व दिन्छ। तपाइँको नयाँ OS मा सुरू गर्नु अघि यसलाई पढ्न निश्चित गर्नुहोस्। जे होस्, यदि तपाईंले कुनै पनि अवसरले यो हराउनुभयो भने, तपाईं तिनीहरूलाई सुरू मेनूमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। समर्थन भन्दा गाइडको यो अधिक विचार गर्नुहोस्। कहिलेकाँही यो साना चीजहरू हुन् जसले ठूलो त्रुटिहरूमा योगदान पुर्‍याउँछन्।
कुनचाहिँ उत्तम हो निर्णय गर्दै:
स्थिति, हार्डवेयर, वा सफ्टवेयरमा निर्भर गर्दै, तपाईं कुन चरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि युट्युब दुबै समस्याहरू अगाडि र पछाडि छेउमा छेउछाउका समस्याहरूको समाधानका लागि उत्तम हो। साथै, तपाईं साथ पछ्याउन सक्नुहुन्छ; यसले तपाईलाई धेरै मद्दत गर्दछ। यूट्यूब कुनै पनि समस्याको उत्तम समाधान हुनसक्दछ। दोस्रो उत्तम तरिका भनेको अनुप्रयोग अनुप्रयोग प्रयोग गर्नु हो। सुझावहरू अनुप्रयोगसँग भर्चुअल सहायता छ, जसले तपाईंलाई चरणहरूको मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ। समस्याहरू प्राय अनुप्रयोगमा अवस्थित हुन्छन्, त्यसैले माइक्रोसफ्टले दिएको सुझावहरूको भन्दा कुन कुन बढी राम्रो प्रयोग गर्ने।
अन्तमा, विन्डोज १० मा मद्दत लिनका लागि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। यद्यपि यो सही तरिकाले छनौट गर्न आवश्यक छ जुन तपाईं सामना गरिरहनुभएको मुद्दाहरूको समाधान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। फ्रिजिंग स्क्रिनबाट अनुप्रयोगहरू सुरू नभएसम्म, तपाई समाधानहरू भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। हामी चाहन्छौं कि विन्डोज १० मा कसरी मद्दत गर्ने भन्ने बारे तपाइँले केहि बिचारहरू प्राप्त गर्नुभयो। यदि तपाइँले यस पोष्टलाई जानकारीमूलक पाउनुभएको छ र केही अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्नुभयो भने, तपाइँको विचारहरूलाई तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्।
विन्डोज १० विद्यार्थी छुट कसरी पाउने?
सर्वश्रेष्ठ ड्रपबक्स विकल्प २०२० मा तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ
कसरी प्राइम भिडियो Day० दिन नि: शुल्क परीक्षण प्राप्त गर्ने?
चलचित्र हेर्नको लागि उत्तम साइट
hulu मा anime हेर्नु पर्छ
चलचित्रहरू डाउनलोड गर्न सुरक्षित ठाउँ
विन्डोज १० बाट क्रोमकास्टमा कसरी जडान गर्ने
आज नेटफ्लिक्स समस्या भइरहेको छ